Inosunga Comb Mutengesi - Wholesale Inosunga Comb Vagadziri
Yakakwira Mhando yePurasitiki Inosunga Comb Inoshandiswa Kusunga Bhuku
Kukura Kunowanikwa: 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 19mm, 22mm, 25mm, 28mm, 32mm, 35mm, 45mm, 51mm, nezvimwewo Kureba: 21 zvindori kana 19 zvindori OEM zvinogamuchirwa. Muzinga wedu wepurasitiki unonziwo: PVC muzinga wepurasitiki, zvindori zvepurasitiki zvindori, PVC mapurasitiki emizinga mhete inoshanda pakusunga kwetsamba., Bhuku rekubika. Tinogona kukupa yakasarudzika kurongedza maitiro: Mune chena bhokisi, ruvara bhokisi, mu spool, mune maindasitiri katoni, sekukumbira kwako. PVC Binding Comb inozivikanwa kwazvo uye inowanzo shandiswa kusunga mabhuku nemagwaro. ItR ...
A4 Plastiki PVC Inosunga Comb PVC Yakasunga Mhete
Yakagadzirwa nePVC zvinhu Kukura kubva pa6mm kusvika pa51mm Inowanikwa mumhando yakapetwa uye isina kuvhurwa Pre-yekucheka saizi: 21 zvindori, 19 zvindori, makumi matatu nemasere, makumi mana makumi mana nemasere nemasere makumi mana nemasere Inoenderana neyese yakajairwa inosunga muchina Yedu yepurasitiki muzinga inonzi zvakare: epurasitiki mizinga mhete, PVC epurasitiki mizinga mhete inoshanda pakusunga kwetsamba. Tinogona kukupa yakasarudzika kurongedza maitiro: Mune chena bhokisi, ruvara bhokisi, mu spool, mune maindasitiri katoni, sekukumbira kwako. Tsananguro padiki padiki nhamba yemazino packi ...
Hofisi Uye Zvigadzirwa zveChikoro Kwakanaka Hunhu hweMweya PVC Plastiki Inosunga Comb
1. Chinyorwa: ese mavara eiyo PVC zvinhu: tsvuku / yero / bhuruu / girini / nhema / chena / yakajeka yakajeka zvichingodaro. 2.Size: 6mm / 8mm / 10mm / 11mm / 12mm / 14mm / 16mm / 18mm / 19mm / 20mm / 22mm / 25mm / 28mm / 32mm / 35mm / 38mm / 45mm / 51mm 3. Kurongedza: 100pcs / chena bhokisi, 20 mabhokisi / katoni ye6-11mm; 100pcs / chena bhokisi, 10 mabhokisi / katoni e12-22mm; 50pcs / chena bhokisi, 10 mabhokisi / katoni ye22-51mm; 4. FOB chiteshi: Ningbo Isu tinopa yakazara yakazara yakajeka yakajeka mizinga inosunga zvindori. Mavara akasiyana siyana ndeesarudzo yako, senge nhema, chena, tsvuku, bhuruu, ...
Oval Rakaumbwa Yakakwirira Yemhando PVC Pulasitiki Bhuku Rinosunga Comb YeBhuku Kusunga Chinyorwa
Kana iwe uchitsvaga chero epurasitiki Spiral Binding, ndapota usazeza kutibata nesu. Isu tine makumi emakore ezviitiko mundima iyi seimwe yevanotungamira vatengesi kunze kwenzvimbo yedu. Zvigadzirwa edu anogona kusangana European uye American zvinodiwa. Mumwe nemumwe wevamiriri vedu vekutengesa ane ruzivo rwakadzama nezve zvigadzirwa zvedu, izvo zvinovimbisa yakakwira nhanho sevatengi uye kutaurirana kuri nyore pakati pedu. Nehunyanzvi hwedu muzvigadzirwa uye nemaitiro ekugadzira, Isu tinokwanisa kugadzira zvigadzirwa zvitsva iwe ...